July (18) June (9) May (10) April (14) March (8) February (14) January (7) Arrimaha Bulshada Hobyo: Kallumaysato ka cabanaya jariifka shisheeye Boqollaal kallumaysato ah oo ku sugan degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in sedexdi bilood ee la soo dhaafay aysan u shaqo tagin badda. Taasi ayey sheegeen inay sababtay maraakiibta shisheey...
Muqdisho: Nin aragga la' oo biyo-dhaamin ku shaqeysta Maxamed Nuur Axmed oo ku nool magaalada Muqdisho waa 50 sano jir aragga naafo ka ah, wuxuu ku shaqeystaa biyo-dhaamin. Subax walba ceelka ayuu biyaha ka soo dhaamiyaa waxaana rukun u ah qoysas ka shub...
CODKA DHEGEYSTAHA Halkan ka dhegeyso barnaamijka codka dhegeystaha. Cabdullaahi Maxamed Amiin iyo Faadumo Macallin Abuukara ayaa soo jeedinaya....
xoolo dhaqato ganacsato noqday Qoysas xoolo-dhaqato ahaa ayaa hadda ah ganacsato dukaamo iyo maqaayado ku leh degmada Xudur ee gobolka Bakool. Dadkan ayaa la yimid fikir ah markii ay inta badan xoolihi ay dhaqanayeen ay uga dhintee...
Haween la hayaamay xoolo dhaqatada Waxaa jira dad badan oo ganacsigoodu ku tiirsanaa xoolo dhaqatada, balse hadda ay ku dhacday suuq la'aan maadaama xoolihi noolaa abaartu saamaysay. Haddaba waxaa jira haween la soo guuray xoolo dhaqat...
Wareysi: Taliyaha saldhigga galbeed ee Garowe Halkan ka dhegeyso wareysi aan la yeelannay taliyaha saldhigga galbeed ee magaalada Garowe, Bashiir Cusmaan Cawad oo ka warbixinaya dad tahriib u socday oo ay dhowaan dib ugu celiyeen deegaannadii ay ...
Qalab meel isugu keena kalluunka badda ku jira oo caawiyay wax-soo-saarka kalluumeysatada Puntland (ERGO) - Maxamuud Saciid Geesdiir oo ah 55 jir ka mid ah kalluumeysatada deegaanka Baargaal ee gobolka Bari ayaa sheegay in lix saacadood oo keliya uu badda uga soo helo kalluun uu tankiisa ka badan y...
Boqollaal haweenka caanaha ku iibiya Laascaanood ah oo ay abaartu shaqo-la'aan dhigtay (ERGO) - Faadumo Yaasiin Cali oo ah hooyo 55 jir ah oo keligeed 12 carruur ah ku korsata magaalada Laascaanood ee gobolka Sool waxay ka walwalsan tahay in laga saaro guriga ay deggan tahay oo kir...
CODKA DHEGEYSTAHA Halkan ka dhegeyso barnaamijka codka dhegeystaha. Cabdullaahi Maxamed Amiin ayaa soo diyaariyay soona jeedinaya....
11 FEB 2017 Akhri
Hooyooyin sunno-gudaya gabdhahooda (ERGO) - Sahra Cismaan Saciid 11 jir ayay ahayd maalintii la gudayay oo hadda laga joogo 24 sano. Waxay aheyd maalin ay cadceeddu aad u kululeyd. Maaddaama ay ku nooleyd deegaan miyi ah oo hoos y...
CODKA DHEGEYSTAHA Halkan ak dhegeyso barnaamijka Codka Dhegeystaha iyo Cabdullaahi Maxamed Amiin....
Barnaamijka Codka Dhegeystaha Ku soo dhawaada barnaamijka codka dhageystaha oo sabti walba ka baxa idaacada Ergo. Waxaa soo jeedinaya barnaamijka Moxamed Amiin Abdullahi...
Wareysi aan la yeelanay Maxamuud Cismaan Maxamuud oo ah carriyaha heesta Kalgacaylki guumooyey aboowe Halkan ka dhegeyso wareysi aanu la yeelanay hal-buure sugaaneed Maxamuud Cismaan Maxamuud oo la yaqaan Chief. Weriyaha Ergo Nimco Muuse Dallaf ayaa kula kulantahay magaalada Dhahar lana yeelatay warey...
Qaar ka mid ah figradaha dadka boga face boogga ee Ergo kaga dhiibteen dhibaatada abaaraha Qaar ka mid ah figradaha dadka boga face boogga ee Ergo kaga dhiibteen dhibaatada abaaraha ee ka taagan wadanka. waxaana inoo soo jeedinaysa Warda Sagal Axmed Rooble...